Wadada kaliya ee Mareykanka iyo Iran kuwada hadli karaan – Bandhiga
Home Wadadad kaliya ee Mareykanka iyo Iran kuwada hadli karaan?
Wadada kaliya ee Mareykanka iyo Iran kuwada hadli karaan
in Wadadad kaliya ee Mareykanka iyo Iran kuwada hadli karaan?
Madaxweynaha dalka Iran Mudane Xasan Ruuxaani oo ka hadlaya khilaafka kala dhaxeeya Mareykanka ayaa waxa uu sheegay in USA iyo wadamada kale ee loo yaqaan P5+1 inuu la heshiin doono hadii Mareykanka uu qaado cunaqabateynta ganacsi ee saaran Iiraan.
Madaxweynaha Iran oo arrintan ka hadlay isagoo shir jaraa’id ku qabanayay caasimadda Tehraan ayaa waxa uu kaga jawaabay suura galnimada wadahadal dhexmara Washington iyo Tehraan hadii xilka laga xayuubiyo Trump.
Waxaa Ruuxaani uu intaa ku daray inta uu Trump joogo in wax micno ah aysan u laheyn wadahallada.
Mr Ruuxaani ayaa sheegay in dhibaatada Iiraan aysan aheyn xilka uu hayo Trump balse ay tahay oo kaliya in Iiraan ay hesho waxa ay u baahan tahay taasi oo suura galin karta in labada dhinac ay wadaxaajoodkooda ay sii Ambaqaadaan.
Donald Trump ayaa sanadkii hore wuxuu ku dhawaaqay in Mareykanka uu ka baxay heshiiskii wadamada quwadaha ay la galeen Iiraan, waxaana uu ku eedeeyay in ay maalgaliso kooxaha loogu yeero Argagixisada.